Waxaa maxay Sababaha Qurba-joogta shaqo doonka ah looga hormariyo kuwa la midka ah ee guda-joogta ah?
By ibrahim Aden shire October 11, 2017
Waxaan ka mid ahay qurba-joogta, sidoo kale waxaan dhiiri galiyaa in qurba-joogtu dhulki ku laabato si fiicanna loogu soo dhaweeyo https://hiiraan.com/op4/2017/may/142372/three_reasons_why_we_should_welcome_immigrants.aspx. Hase ahaatee waxaad mooddaa si kale loo fahmay imaanshaha qurba-joogta shaqo doonka ah, culaysyana ay abuureen. Waxaa soo badanayo cabashooyinka la xariiro shaqo bixinta oo ka imaanayo dhalinyarada wax ku baratay dalka gudahiisa. Dhalintaan ayaa ku doodayo in wax alla wixii shaqo nacfi fiican lahaa la siiyo qurba-joogta iyagana looga tagay shaqooyinka hoose oo kaliya. Si mugdigaan meesha looga saaro waxaan isku dayayaa inaan bidhaamiyo arinku uusan ahayn sida loo fahmay iyo cidda bixiso shaqooyinka ay qurba-joogu bixiyaan iyo nooca ay tahay.